umatshini wokucheba umbona weKenya,ukuqhuba ngenqwelo mafutha okanye ngenjini yedizili
Nge-Epreli ka-2019, omnye wabathengi bethu baseKenya uyalele 2 umisela umatshini wokukroba umbona .Ngokuhambelana neemfuno zakhe ,Simlingise injini yepetrol kunye ne-injini yedizili.ufuna uvavanye lo matshini wombona kwaye uza kuthatha isigqibo malunga nomyalelo wakhe wexesha elizayo .athi ummbila sesona sisityalo esibalulekileyo seAfrika ,ufuna ukuthengisa lo mngxunya wombona kunye nomatshini wokubhula eKenya nakwamanye amazwe angabamelwane. kwi-imeyile yakhe wazise izinto ezininzi zombona eAfrika .
Ummbila sesona sityalo sisichumiso sibaluleke kakhulu esityalwe ngokubanzi emasimini aseAfrika. Umbona omninzi uveliswa minyaka le kunayo nayiphi na enye ingqolowa. kukho malunga 50 uhlobo lwengqolowa emhlabeni,banemibala eyahlukeneyo, ukwakheka kunye neemilo zengqolowa kunye nobungakanani. kodwa umbona mhlophe kunye nobutyheli zezona ntlobo ziqhelekileyo. Iindidi ezimhlophe nezityheli zikhethwa ngabantu baseAfrika.Corn zizityebi ngeevithamini A, C kunye no-E, iicarbohydrate, kunye nezimbiwa ezibalulekileyo, kwaye iqulethe 9% iprotein. Zizityebi kwifayibha yokutya kunye neekhalori eziyimithombo elungileyo yamandla eAfrika.Zonke iinxalenye zombona zinokusetyenziselwa ukutya kunye neemveliso ezingezozokutya.Ingqolowa yembewu ingasetyenziselwa ukutya kwabantu kunye nesiqu sommbila ,amagqabi anokusetyenziselwa ukutya kwemfuyo.
E-Afrika ,abanye abantu batya ukutya okwenziwe ngombona kathathu ngemini.Ngokuba usitya isidlo sakusasa, isidlo sasemini okanye isidlo sangokuhlwa eAfrika, kukho isitya sombona sokuhamba naso, okanye yenza eyona nto iphambili kuyo.ukutya kwesidlo sangokuhlwa kunamagama ohlukileyo kunye neendlela ezahlukeneyo zokupheka kwilizwe laseAfrika .
Kuxhomekeka ekubeni uphi ,ungabiza isidlo sombona ngegama elahlukileyo eAfrika.Zambia ,Bayibiza iSadza.I-Ghana ngabantu ababizwa ngokuba yi-Banku okanye i-Kenkey.Ugali okanye u-fufu ligama eliqhelekileyo lokutya okuziinkozo empuma ye-Afrika ,njenge Mali,Thogo,I-Benin njl .Nigeria yayibiza ngokuba ngu-Ogi okanye i-Akamu. Ungathenga ngokugqibeleleyo ukutya okuziinkozo kula mazwe maninzi aseAfrika ukwenza ukutya okuziinkozo.Kukhona amakhulu eendlela zokutya umbona e-Afrika.
Ukusetyenziswa komatshini wokuchola umbona
Nokuba ungapheka njani umbona kwilizwe laseAfrika ,badinga i-peel kunye nokubhula kernel kernel evela cob.our umthengi waseKenya usixelele ukuba bawenza lo msebenzi ngesandla ngaphambili,ayisiyongxaki yokusebenzela kuphela kodwa ichitha ixesha. Umlimi uchitha ixesha elininzi kule fama esebenza .so ke ufuna ukusebenzisa umatshini ukusombulula le ngxaki.usifumane kwi-intanethi ,emva kokunxibelelana nge-imeyile kunye nokufowuna ,uthatha isigqibo sokuthenga 2 iseta umatshini wokucheba umbona weKenya.we uya kuyithumela 2 ibeka oomatshini bokuchola umbona kwizibuko laseMombasa,Khenya . Uza kukhetha umatshini phaya .Kwavuya ukubonelela ngomatshini wokucheba umbona kumlimi waseKenya. Umatshini wokucheba umbona uza kusindisa umlimi waseAfrika kwifama enzima..